Jekiseni kuumbwa - Mestech Industrial Limited
Plastic jekiseni Kuumbwa ndiyo inonyanya kushandiswa imwe yepurasitiki kuumbwa. Plastiki jekiseni rakaumbwa zvikamu zvinoshandiswa mune zvemagetsi, zvemagetsi, zvemagetsi, zvekurapa, zvekufambisa, mota, mwenje, kuchengetedza kwezvakatipoteredza, chengetedzo, midziyo yemumba, midziyo yemitambo uye mamwe maindasitiri uye zvigadzirwa.
Chii chinonzi jekiseni kuumbwa? Plastiki jekiseni kuumbwa inzira yekugadzira yekugadzira zvikamu mune imwe tembiricha renji, kuburikidza nesikuru inokonzeresa zvakanyungudika zvakakwana zvigadzirwa zvepurasitiki, yakanyanya-kumanikidza jekiseni muforoma mhango, mushure mekutonhora uye kurapa, kuti utore nzira yekuumba. Iyi nzira yakakodzera kugadzirwa kwebatchch yezvikamu zvakaoma uye ndiyo imwe yenzira dzakakosha dzekugadzirisa. Pane matanho matanhatu: kuvhara chakuvhe, yakanyungudika jekiseni repurasitiki, kumanikidza kuchengetedza, kutonhora, kuvhura chakuvhe uye chigadzirwa kutora. Speed, kumanikidza, chinzvimbo (sitiroko), nguva uye tembiricha zvinhu zvishanu zvakakosha zvejekiseni kuumbwa.
Zvinhu zvitatu zvejekiseni yekugadzira chinhu
Kushandiswa jekiseni Kuumbwa zvigadzirwa
(1) mune zvigadzirwa zvemagetsi:
(2) mumidziyo yeMumba: Mugadziri wekofi, juicer, firiji, air conditioner, fan washer uye microwave oven
(3) muMagetsi emidziyo: Mita yemagetsi, bhokisi remagetsi, kabhodhi yemagetsi, frequency converter, kuputira kavha uye switch
(4) mune zvekurapa uye zvekurapa zvekushandisa nemidziyo: Magetsi anoshanda, sphygmomanometer, sirinji, inodonhedza, bhodhoro remushonga, massager, chishandiso chekubvisa bvudzi, michina yekusimba
(6) Muzvigadzirwa zvemabhizimusi: Muchina chiridzwa pani, giya, chinja, kuvheneka.
(7) Traffic chishandiso uye Mota midziyo (rambi chivharo, yakavharika) Signal mwenje, kusaina, doro muyedzo.
Mould, jekiseni Kuumbwa muchina uye epurasitiki mbishi zvinhu zvinoumba chinhu chakakosha chikamu chejekiseni. The Foroma uye jekiseni Kuumbwa muchina ndiwo ekugadzira michina, uye epurasitiki mbishi zvinhu zvinoshandiswa kuumba chigadzirwa chigadzirwa.
1. jekiseni anoumba
Jekiseni muforoma rudzi rwechigadzirwa chekugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki; zvakare chishandiso chekupa epurasitiki zvigadzirwa zvakakwana chimiro uye chaiyo saizi. Jekiseni Kuumbwa rudzi rwekugadzirisa nzira inoshandiswa mukugadzira batch yezvimwe zvikamu zvakaoma. Zvikurukuru, iyo yakanyungudika epurasitiki inoiswa jekiseni muforoma mhango nejekiseni jekiseni muchina pasi yakanyanya kumanikidza, uye chakaumbwa chigadzirwa chinowanikwa mushure mekutonhora uye kurapa. Jekiseni muforoma inogona kugoverwa mumhando dzakasiyana zvichienderana neyakaumbwa chimiro, zvigadzirwa dhizaini, yekugadzira modhi uye kuisa uye mashandisiro maitiro.
Nekuda kwemutengo wakakwira wekugadzira weforoma, asi hupenyu hwavo hwakareba hwebasa uye kugadzirwa kwepamusoro kwekugadzira, zvinowanzo shandiswa mukugadzira kwakawanda. Jekiseni muforoma inoshandiswa mukugadzira kwakawanda kwepurasitiki zvikamu. A yakawanda yepamusoro-kunyatsoshanda epurasitiki zvigadzirwa, zvikuru kugovana mutengo chakuvhuvhu kugadzirwa, saka kugadzira mutengo mumwe chete chigadzirwa jekiseni Kuumbwa iri pasi zvikuru kupfuura dzimwe dzimwe kugadzira nzira. Pane matanho matatu eforoma dhizaini uye kuumbwa kusimbiswa.
(1) Mould magadzirirwo:
Mould dhizaini yakavakirwa pane chigadzirwa dhizaini, iko kushandisa dhizaini software, zvinoenderana neforoma yekugadzira nhanho yemakaniki kugadzirisa uye jekiseni kuumba maitiro maitiro, dhizaini yeiyo yose chakuvhuvhu mashandiro, zvikamu.
(a) Nhanho yekutanga ndeye kuongorora dhizaini yezvigadzirwa zvepurasitiki
(b) Nhanho yechipiri kusarudzwa kwezvinhu zvinofa
(c) Nhanho yechitatu inogadzira dhizaini dhizaini
(d) Nhanho yechina inoumba zvikamu dhizaini
(2) Mould kugadzira
Kugadzirwa kwemuvhu kunonyanya kuburikidza nekugadziriswa kwemuchina kupedzisa Dhizaini yekudzokorora → kugadzirira zvinhu → kugadzira → muforoma base kugadzira → muforoma sisitimu yekugadzirisa → electrode kugadzira → mold zvikamu kugadzira → kuongorora → gungano → kubhururuka muforoma → kutongwa muforoma → kugadzirwa
Iyo yekugadzirisa kutenderera kwejekiseni muforoma kunoenderana nekunetseka nekugadziriswa padanho reiyo fomu. Iyo yakajairika yekugadzira kutenderera ndeye 20-60 mazuva ekushanda. Muchina unoshandiswa muforoma kugadzira: CNC, lathe, yakajairika yekugaya muchina, pamusoro pekukuya, EDM, WEDM, pamwe nekuungana kwemaoko maturusi, ekuyera maturusi, nezvimwe.
(3) Mhando jekiseni anoumba:
Jekiseni muforoma inogona kukamurwa mumhando dzakasiyana zvichienderana neforoma dhizaini, chigadzirwa dhizaini zvinodiwa, yekugadzira modhi uye kuisa uye mashandisiro maitiro.
(a) Hwendefa mbiri dzedanda: mune jekiseni kuumbwa, iyo inofamba fosi uye yakagadziriswa muforoma yeforoma inoparadzaniswa, uyezve zvikamu zvepurasitiki zvinoburitswa kunze, inozivikanwawo seye mbiri ndiro ndiro. Iyo yakapusa uye yakakosha epurasitiki jekiseni muforoma. Inogona kuve yakagadzirirwa seyese mhango jekiseni muforoma kana yakawanda mhango jekiseni muforoma zvinoenderana kudiwa. Iyo inoshandiswa zvakanyanya jekiseni muforoma. Mould nokuti kuroora kana multi mhango jekiseni Kuumbwa,
(b) Matatu ndiro chakuvhuvhu: inozivikanwa seyaviri yekuparadzanisa muforoma. Inofananidzwa neiyo-chidimbu chekunze jekiseni muforoma, iyo yakapatsanurwa jekiseni jekiseni muforoma inowedzera chikamu chinotakurika chinobvongodzwa mune yakatarwa fomati yezvinhu zveiyo poindi gedhi mould. Nekuda kweyakaomeswa dhizaini uye yakakwira yekugadzira mutengo, kazhinji haina kushandiswa muforoma yemahombe mativi.
(c) Hot mumhanyi muforoma: inopisa mumhanyi muforoma zvinoreva chakuvhuvhu anoshandisa kudziyisa mudziyo kuita uchanyunguduka mugero kwete simbisa nguva dzose. Nekuti inoshanda zvakanyanya kupfuura yechinyakare kugadzirwa kweforoma, uye zvimwe zvinhu zvekuchengetedza, saka inopisa mumhanyi muforoma mune yanhasi maindasitiri nyika dzakabudirira nematunhu anoshandiswa zvakanyanya. Inopisa mumhanyi system ine imwezve inopisa mumhanyi system kupfuura yakajairika mold, saka mutengo wakakwira.
(d) Mavara maviri muforoma: inowanzo kunzi marudzi maviri epurasitiki zvinhu mune imwechete jekiseni kuumbwa muchina jekiseni kuumbwa, maviri kuumbwa, asi chigadzirwa chimuumbwa kamwe chete. Kazhinji, izvi Kuumbwa kwacho kunodaidzwa zvakare kuti kaviri jekiseni kuumbwa, iyo inowanzo kupedzwa ne seti yeforoma, uye inoda yakasarudzika maviri-mavara jekiseni kuumbwa muchina.
(4) Iyo yekuvaka subsystem yejekiseni muforoma ndeinotevera
Iyo jekiseni muforoma inowanzo kuverengerwa neinotevera sub-masystem:
(a) Gating system. Icho chinoreva kune epurasitiki kuyerera chiteshi muforoma kubva jekiseni kamwene kusvika kune mhango. Iyo yakajairika gating system inoumbwa nesprue, muparidzi, gedhi uye inotonhora gomba.
(b) Kurutivi rwekuparadzanisa uye yakakosha kudhonza mashandiro.
(c) Inotungamira mashandiro. Muforoma yepurasitiki, inonyanya ine basa rekumisikidza, kutungamira uye kutakura rimwe divi kumanikidza kuti ive nechokwadi chekufamba uye kugadzirisa furu yekuvhara. Iyo yekufa yekuvhara inotungamira mashandiro inoumbwa neyekutungamira mbiru, giraidhi sleeve kana gwara gomba (rakananga kuvhurwa pane template) uye kumisikidza koni pamusoro.
(d) Kurasa / kuparadza mashandiro. Kusanganisira kusundira kunze uye musimboti kudhonza mashandiro. Inonyanya kushandiswa kubvisa zvikamu kubva muforoma. Iyo inoumbwa ne ejector tsvimbo kana pombi jacking kana kusundira ndiro, ejector ndiro, ejector tsvimbo yakagadziriswa ndiro, kumisazve tsvimbo uye kudhonza tsvimbo.
(e) Kupisa kwekushisa system. Kutonhora uye kudziyisa zvishandiso.
(f) Kununura hurongwa.
(g) Kuumba zvikamu zvinoreva zvikamu zvinoumba muforoma mhango. Inonyanya kusanganisira: chibhakera, chikadzi kufa, moyo, kuita tsvimbo, kugadzira mhete uye kuisa.
(h) Zvikamu zvakagadziriswa uye zvakaiswa. .
(5) Zvinyorwa zveforoma
Plastiki muforoma inosanganisira thermoplastic mold uye thermosetting plastiki mold. Iyo simbi yepurasitiki muforoma inodiwa kuti ive nezvimwe zvimiro senge simba, kuomarara, kupfeka kuramba, kudziya kwemafuta uye ngura kuramba. Uye zvakare, inodawo kuve neyakagadziriswa maitiro, senge diki kurapwa kurapwa, nani kugadzirisa mashandiro, kurwisa ngura zvirinani, zvirinani kukuya nekukorobha mashandiro, zvirinani kugadzirisa kutenderera mashandiro, kukwirira kwakakora, yakanaka yekupisa conductivity uye yakatsiga saizi uye chimiro chekushanda mamiriro.
Rudzii rwejekiseni chinhu chinoshandiswa mujekiseni jekiseni rine pesvedzero huru pakusarudzwa kweforoma simbi. Kana iyo yekumisikidza mumiririri kana imwe nadzurudzo mumiririri yakawedzerwa, senge girazi faibha, kukuvadzwa kweforoma kwakakura, saka kusarudzwa kwezvinhu kunofanirwa kutariswa zvakazara. Akasimba acid epurasitiki zvinhu zviri PVC, POM, PBT; isina kusimba acid epurasitiki zvinhu zviri PC, PP, PMMA, PA. Kazhinji, S136, 1.231, 6420 uye mamwe maforoma esimbi anosarudzwa epurasitiki yakasimba, nepo S136, 1.2316420, SKD61, NAK80, pak90718, nezvimwe zvinogona kusarudzwa kune mapurasitiki asina simba. Izvo zvinoonekwa zvinodikanwa zvezvigadzirwa zvakare zvine pesvedzero huru pane kusarudzwa kweforoma zvinhu. Kune zvikamu zviri pachena uye zvigadzirwa zvine girazi pamusoro pekupora, zvinhu zviripo ndeS136, 1.2316718, NAK80 uye pak90420. Iyo furu ine yakakwira pachena kujeka zvinodiwa inofanirwa kusarudza S136, ichiteverwa ne420. Kana ichingo sangana nezvinodiwa zvechigadzirwa pasina kufunga mutengo uye mutengo, inogona kunge isingaite yakanaka dhizaini, chakuvhuvhu kugadzira mutengo zvakare iri pamberi pekutanga.
2.1njection Kuumbwa equipments
(1). Jekiseni Kuumbwa Machine:
ndiyo huru yekuumba michina yekugadzira thermoplastic kana thermosetting plastiki mune akasiyana maumbirwo epurasitiki zvigadzirwa nepurasitiki Kuumbwa muforoma Horizontal jekiseni Kuumbwa muchina, wehunyambiri jekiseni Kuumbwa muchina, maviri mavara jekiseni Kuumbwa muchina, uzere wemagetsi jekiseni Kuumbwa muchina Zvisinei, zvisinei jekiseni Kuumbwa muchina, ayo akakosha mashandiro ari maviri:
(a) Pisa plastiki kuti inyunguduke.
(b) Kumanikidza kukuru kunoiswa mupurasitiki yakanyungudutswa kuti ubudise uye uzadze mhango. Iwo makuru eparameter ejekiseni kuumbwa muchina ndeaya: kupomba simba, kunonyanyisa jekiseni vhoriyamu, huwandu uye hushoma muforoma ukobvu, inofamba sitiroko, dhonza tsvimbo nzvimbo, ejection sitiroko uye ejection kumanikidzwa. Kune zvikamu zvine saizi dzakasiyana, zvivakwa uye zvishandiso, pamwe neforoma dzemhando dzakasiyana uye mhando, akasiyana mamodheru uye paramita ejekiseni kuumbwa michina inofanirwa kusarudzwa. Yakazara yemagetsi jekiseni Kuumbwa muchina une zvakanakira yakakwira jekiseni kumhanya, chaiyo kudzora uye yakakwirira yekugadzira kugona. Rinoshandiswa jekiseni Kuumbwa vamwe nemazvo zvikamu.
(2) Zvekushandisa zvishandiso:
(a) Iyo inofambisa jekiseni kuumbwa muchina ndeye otomatiki yekugadzira michina iyo inogona kutevedzera mamwe mashandiro emaoko ekumusoro emunhu, uye inogona otomatiki kuidzora kutakura zvigadzirwa kana kushandisa maturusi zvinoenderana nezvakatemerwa kare zvinodiwa. Iyo manejimendi inogona kuve nechokwadi chekuita kweiyo kutenderera kutenderera, kunatsiridza mhando uye kuita kuti ive yakachengeteka. With kukurumidza kukura epurasitiki kubudiswa indasitiri mu China, mwero kushandisa michina jekiseni Kuumbwa michina iri kuva yepamusoro uye yakakwirira. Yemazuva ano jekiseni kuumbwa michina inowanzo kuve neyakagadzirirwa nema manipulators kunatsiridza kugadzirwa kwekuita.
(b) Hita yemafuta / mvura inotonhorera: kudziyisa kana kutonhora nemvura inoyerera kuburikidza neforoma, ichiwedzera tembiricha yevhu, ichivandudza mhando yepamusoro, kana kukurumidza kudzikisira tembiricha yekuumbika kuti ivandudze kugadzirwa.
(c) Dehumidification dryer: bvisa hunyoro kubva mupurasitiki zvigadzirwa nekudziya uye kufuridza.
Jekiseni muforoma workshop
Jekiseni Kuumbwa dzaFord
Zvikamu zvepurasitiki kupenda mutsara
Mapurasitiki resin anoshandiswa mujekiseni kuumbwa: Pazasi pane akajairika thermoplastics anoshandiswa mujekiseni kuumbwa: Acrylonitrile Butadiene Styrene, Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), ndeye opaque thermoplastic uye amorphous polymer. ... Polyethylene. ... Polycarbonate. ... Polyamide (Nylon) ... Yakakwira Impact Polystyrene. ... Polypropylene
Mashoko Kuwandisa Muforoma
Shrinkage Feature Kushanda
Giremu / cm3 %
ABS(Acrylonitrite Butadiene Yakajeka) 1.04 ～ 1.08 0.60 Yakadzikama saizi, yakanaka nzwisisika michina zvivakwa,nyore electroplating, nyore jekiseni Kuumbwa epurasitiki dzimba zvemagetsi zvigadzirwa
PC (Polycarbonate) 1.18 ～ 1.20 0.50 Simba rakanaka rekuita, kukura kwakasimba uye kuputira kwakanaka.Varombo ngura nemishonga uye vanopfeka nemishonga epurasitiki pekugara, inodzivirira butiro, zvidimbu zvidiki zvekutumira zvigadzirwa zvemagetsi, zvigadzirwa zvemagetsi
PMMA(Polymethyl methacrylate) 1.17 ～ 1.20 0.60 Iyo ine yakanaka transmittance ye92% uye yakanaka yakakwana yemagetsi simba.Notch inokanganisa simba yakaderera, zviri nyore kunetseka kutsemuka Transparent lens uye ratidza dial dial maikoni echiridzwa
PP(Polypropylene) 0.89 ～ 0.93 2.00 Iyo ine yakakwira shrinkage, mwando kuramba,kupisa kwakanyanya kupisa uye hakusi nyore kubvarura.Low Pfeka kuramba, nyore kuchembera, murombo yakaderera tembiricha kuita Midziyo yezvikafu, tafura, microwave oven mabhokisi, zvokurapa midziyo
(chloride) 1.38-1.41 1.50 Yakaomarara, isina kupfeka, yakanaka kuputira, Kuumba zvakanyanya kuoma, kushomeka kwepamusoro-tembiricha kuita Kugadzira mapaipi nemaprofiles
Zvinhu zvenaironi 1.12 ～ 1.15 0.7-1.0 Zvakaoma, kupfeka kusagadzikana, kusagadzikana nemvura, kuneta kusagadzikana, kuputira kwakanaka. Yakakwira shrinkage, inongedzera Machine zvikamu, makemikari zvikamu, hutachiwana zvikamu
POM (Polyacetel) 1.42 2.10 Yakanaka michina zvivakwa, kukwirira kwakasimba uye kuomarara, kupfeka kuramba uye kukanganisa kuramba. Kusimba kwemafuta akasimba Machine zvikamu, makemikari zvikamu, zvikamu zvekutapurirana, zvikamu zvekupesana uye zvikamu zvekufambisa zvinoshanda patembiricha yemukati
TPU(Thermoplastic Polyurethane) 1.05 ～ 1.25 1.20 Elastomer, kusakara nemishonga, mafuta nemishonga, yakakwirira uye yakaderera tembiricha elasticity, isina-chepfu Inoshandiswa zvakanyanya mukurapa, chikafu, zvigadzirwa zvemagetsi uye yakaderera tembiricha nharaunda
Jekiseni Kuumbwa maitiro ndeyekuti iyo yakanyungudutswa mbichana zvinhu zvinomanikidzwa, kubayiwa jekiseni, kutonhorera uye kupatsanurwa kugadzira imwe chimiro yezvikamu zvakaperera. Huru jekiseni Kuumbwa maitiro epurasitiki zvikamu zvinonyanya kusanganisira 7 nhanho. : Parameter yekumisikidza -> kuvhara chakuvhe-> kuzadza -> (gasi yakabatsirwa, mvura yakabatsirwa) kumanikidza kuchengetedza -> kutonhora -> kuvhurika kweforoma -> kudonhedza.
Speed, kumanikidza, chinzvimbo (sitiroko), nguva uye tembiricha ndiwo mashanu akakosha parameter ejekiseni kuumbwa maitiro. Mune jekiseni kuumbwa kwekugadzira, zvinonyanya kugadzirisa izvi parameter kuti uvandudze uye uwane unokwanisa saizi uye chitarisiko.
Zvinomwe chaiwo jekiseni Kuumbwa michina
1. Double jekiseni Kuumbwa
2. Over-Kuumbwa jekiseni
3. Hot mumhanyi jekiseni Kuumbwa
3. IMD: mu-chakuvhuvhu kushongedzwa jekiseni
4. Jekiseni rezvikamu zvakakura
5. Jekiseni kuumbwa kwekusimbisa zvikamu
6. Jekiseni Kuumbwa kwemotokari zvikamu
7. Matete matete zvikamu zvejekiseni
Tinogona kupa yako epurasitiki jekiseni rakaumbwa zvikamu mumhando dzakasiyana dzakajairika jekiseni inokanganisa polymer uye muhuwandu hwe1,1 gramu-10kgs iwe aunoda. Uye zvakare, isu tinokwanisa pamusoro-kuumba yakamisikidzwa inoiswa, simbi inoshungurudza zvinongedzo kana zvimwe zvepurasitiki jekiseni zvakaumbwa zvikamu kuti upe chako chigadzirwa sehunyanzvi kupedzisa. Sub-magungano anogona zvakare kugadzirwa sechikamu chedu epurasitiki jekiseni kuumbwa masevhisi uye akaiswa mukati kune ako zvaunoda. Izvi zvinoshandawo nenzira dzakasiyana dzekupedzisa, kusanganisira:
* Chrome yakanamirwa pamapurasitiki
* Dhijitari kufungidzira
* Pad kudhinda
* RF kudzivirirwa
* Kupaka uye stillage's
* Jekiseni kuumbwa kwehunhu kudzora Isu tinopawo inokurumidza tooling, prototyping uye post kuumbwa masevhisi.
Kuumba urema uye kugadzirisa matambudziko
Mushure mekuumbwa, pane mimwe misiyano pakati pezvikamu zvepurasitiki uye zvakafanotemerwa zviyero zvemhando yepamusoro (kuongorora zviyero), izvo zvisingakwanise kusangana nezvinodiwa zvechinhu chinotevera. Uku ndiko kukanganisa kwezvikamu zvepurasitiki, izvo zvinowanzo kunzi matambudziko emhando yepamusoro. Tinofanira kuongorora izvo zvinokonzeresa izvi uye nekuzvidzora kusvika padiki. Kazhinji kutaura, hurema uhwu hunokonzerwa neanotevera maficha: chakuumba, mbishi zvigadzirwa, maitiro parameter, zvishandiso Zvakatipoteredza uye vashandi.
(1). Ruvara mutsauko: kana iyo jekiseni yejekiseni zvikamu zvekuumbisa zvakasiyana kubva kune imwechete standard color sampuro nemaziso asina kupfeka, ichazotongwa semusiyano wemavara pasi peyakajairika mwenje sosi.
(2). Kusakwanira kuzadza (kushomeka kweglue): jekiseni kuumba zvikamu hazvina kuzara, uye kune matema, void, shrinkage maburi, nezvimwewo, izvo zvisingaenderane neyakajairwa template, iyo inonzi kushomeka kweglue.
(3). Warping deformation: chimiro chemapurasitiki zvikamu zvinotenderera uye kumonyorora mushure mekuparadza kana mune inotevera nguva yenguva. Kana iro divi rakatwasuka rakatarisana mukati kana kunze, kana chikamu chakatsetseka chine kumusoro nekudzika, kana tsoka yechigadzirwa isina kuenzana, inonzi deformation, iyo inogona kuve yakakamurwa kuita deformation yemuno uye zvachose deformation.
(4). Weld mutsara mamaki (mitsara): mitsara yakatarisana pamusoro pezvikamu zvepurasitiki, zvakaumbwa nekusanganiswa kwepurasitiki muforoma, asi izvo zvinonyungudika hazvina kunyatsobatanidzwa pamwechete panosangana, saka hazvigone kubatanidzwa kuita chimwe. Iwo anowanzo tambo yakatwasuka, ichikura kubva pakadzika kusvika pakadzika. Ichi chiitiko chinokanganisa maitiro uye michina zvimiro.
(5). Ripple: pamusoro pejekiseni rakaumbwa zvikamu zvine kutenderera kana gore senge kusimba, kana mukati mechijekerere chigadzirwa chine wavy pateni, iyo inonzi ripple.
(6). Kupfuura kumucheto (kupenya, Cape).
(7). Dhiimendi mutsauko: shrinkage uye warpage yejekiseni yakaumbwa zvikamu mukugadzirisa maitiro
2. Hunhu kudzora uye kugadzirisa: Inosanganisira tekinoroji uye manejimendi
(1). Tekinoroji yehunyanzvi: chaiyo sarudzo yezvinhu, chigadzirwa dhizaini dhizaini, kusarudzwa kweakakodzera chakuvhuvhu zvigadzirwa, optimization yeforoma dhizaini dhizaini yekuita kuti izadzise, ​​pedza uye zvikamu kubviswa, zvine musoro kumisikidzwa kwekuparadzanisa pamusoro, kuyerera chiteshi uye rubber inlet; kushandiswa yemhando jekiseni Kuumbwa michina kana maitiro.
(2). Chikamu cheManagement: kudzora kwemhando yezvinhu zvinouya, kuumbwa kweanoshanda marongero emhando uye zviyero, hunyanzvi hwekudzidzisa, kuumbwa kweanonzwisisika maitiro maitiro, kurekodha dhata uye kuongorora, uye kumisikidzwa kwenzwi rehurongwa hwemhando.
Kambani yeMestech inogadzira mazana eakaumbwa uye mamirioni epurasitiki zvigadzirwa zvevatengi vemuno neepasirese pagore. Kana uchida kuziva zvakawanda kana kubvunza pamusoro chitaurwa pamusoro epurasitiki jekiseni Kuumbwa, tapota nesu nhasi.